~ Complete & Fully Furniture Condominium ~
~ Complete & Fully Furniture Condominium ~ 【Followed by English message】 🔎 အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12233 ) 🏘 🏡 ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ရှာနေပါသလား....? လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်နေတဲ့ ဆန္ဒာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် ...
♦️ ( 55 ) လမ်းတင် အရောင်း
♦️ ( 55 ) လမ်းတင် အရောင်း ♦️ S ( 955 ) ♦️ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ♦️ ( စ ) ဈေးအနီး ♦️ ပေ ( 30 x 40 ) ♦️ အရှေ့လှည့် ♦️ သိန်း ( 1500 ) ...
♦️ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောလမ်းမတင် အရောင်း / အဌား ♦️ ♦️R ( 360 ) ♦️ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ♦️ လမ်း ( ၃၀ ) လမ်းမကြီးအနီး ♦️ ပေ ( ၄၅ x ၁၁၀ ) , အနောက်လှည့် ♦️ ဂရန်အမည်ပေါက် ♦️ သိန်း ( ၁၅၀၀၀ ) ( ညှိနှိုင်း ) ♦️ တလဌားရမ်းခ - ( ၁၈ ) ...
🎉🎉** Luxury Style ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရှာဖွေနေသော Customer များအတွက် Parami Residence တွင် RC2 1/2 ရောင်း
🎉🎉** Luxury Style ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရှာဖွေနေသော Customer များအတွက် Parami Residence တွင် RC2 1/2 ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။ **🎉🎉 * 5400 Sqft * ဂရန်(အမည်ပေါက်) * RC2 1/2🏘🏘 * Fully Furniture * High Decoration * MICT Park အနီး။ * ပြည်လမ်းမသို့ ...
(1) Sale & Marketing (Female -5ဦး)
(1) Sale & Marketing (Female -5ဦး) - Customer များနှင့် စကားပြောဆိုပြေပြစ်ရမည် - မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားတတ်ရမည်။ - ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖြစ်သည် (လုပ်သက်တစ်နှစ်ပြည့်ပါက ဘောက်ဆူး(တစ်လစာ ခံစားခွင့်) (အခြေခံလစာ -နှင့် အခြားခံစားခွင့်များ ...
Marketed by Perfect World Property အိမ် ခြံ မြေ ဝန်ဆောင်မှု
** မြို့နယ်စုံ ဈေးတန် နေရာကောင်းသော မြေကွက်ကျယ်များ ငှားမည်။**
** မြို့နယ်စုံ ဈေးတန် နေရာကောင်းသော မြေကွက်ကျယ်များ ငှားမည်။** ** အခြားမြို့နယ်စုံရှိ ကွန်ဒို၊တိုက်ခန်း၊လုံးခြင်းများလည်း အရောင်း အငှားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ** အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက - ☎️09250086345 ☎️09250087887 ...
♦️ ( ၅၄ ) လမ်းအနီး ♦️ အရောင်း
♦️ ( ၅၄ ) လမ်းအနီး ♦️ အရောင်း ♦️ S ( 931 ) ♦️ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ♦️ ( ဘုရင့်နောင် x ဗန္ဓုလ ) ကြား ♦️ ပေ ( ၃၅ x ၄၀ ) , အရှေ့လှည့် ♦️ RC ( ၂ ) ထပ် , မူရင်းစလစ် ♦️ Master Room - ( ၂ ) ထပ် , Single Room- ( ၂ ) ခန်း ♦️ သိန်း ( ၁၁၀၀ ) ( ...
🎉🎉** မြို့နယ်စုံရှိ ဈေးနှုန်းသင့် လုံးချင်းအိမ်အရောင်းစာရင်းများ...**🎉🎉
🎉🎉** မြို့နယ်စုံရှိ ဈေးနှုန်းသင့် လုံးချင်းအိမ်အရောင်းစာရင်းများ...**🎉🎉 1. သာကေတ၊ မာန်ပြေလမ်းသန့် * ပေ(40×60) * ဂရန်(ပ) * BN-1🏘🏘 ** ဈေးနှုန်း - သိန်း 1500(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( ...
စမ်းချောင်းသီးသန့် ရောင်းရန် ရှိပါသည်
စမ်းချောင်းသီးသန့် ရောင်းရန် ရှိပါသည် ပြည်သူ့ကွက်သစ် ၁လမ်း...၁၂ပေခွဲ ၅၀ပေ. ၄လွှာ ပါကေးခင်း...အခန်း ၁ခန်း...Aircon...သံပန်းဆန်းရှိတ်...မီးဖိုခန်း..ရေချိုးခန်း..အိမ်သာကြွေပြားခင်း/ကပ်...ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း... ၄၂၀ သိန်း ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?page=13